Kọfị bụ otu n'ime ihe ọ majorụveraụ atọ kacha mkpa n'ụwa. Ọ bụ ihe ọ madeụverageụ emere na kọfị a roara n'ọkụ. Ọ bụ isi ihe ọ popularụ popularụ na-ewu ewu na ụwa yana koko na tii. Site na mmụba nke ụkpụrụ ibi ndụ ndị anyị na mmụba na-aga n'ihu nke ịmara banyere kọfị kọfị. ...
2020 China Food na Packaging Machinery Industry Association Kwa Afọ e ọma ẹkenịmde ke Shanghai
N'ụtụtụ nke November 24, 2020 China Food and Packaging Machinery Industry Association Annual Conference and the 9th Asian Food Equipment Forum meghere na Shanghai. Ihe karịrị ụlọ ọrụ ngwa ngwa 300, ihe karịrị ụlọ ọrụ 100 ihe oriri mbụ, na ihe karịrị ndị nnọchi anya 500 sonyere ...
Ọnọdụ mmepe na amụma amụma nke ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ ink
1. Isi na nhazi ọkwa nke ink ụlọ ọrụ Ink bụ a ọmụmụ umi na ink ahụ uniformly chụgara na nragide na nwere ụfọdụ viscosity. Ọ bụ ihe dị mkpa maka ibipụta akwụkwọ. Na oku nke taa maka mmepe nke onodu aku na uba ikuku na ikwalite ihe mere ...
Coca-Cola na-anọchi iko ndị a gbanwere, Unilever na-emepụta plastik emegharị abụọ
Ahịa ahịa ụwa dịka Pepsi, Coca-Cola, na Unilever emeela nkwa nkwakọ ngwaahịa siri ike. Ka anyị lee anya, gịnị bụ mmepe nkwakọ ngwaahịa na-adịbeghị anya nke ụdị ndị a? Pepsi-Cola Europe: Dochie karama rọba niile ejiri mee na 2022 Pepsi-Cola Europe, nke ...
The 27-Sino-Pack China International Packaging Industry Exhibition-the eduga professional exhibition platform n'elu ụlọ nkwakọ ngwaahịa
The 27-Sino-Pack China International Packaging Industry Exhibition-the eduga ọkachamara ngosi mgbanwe n'elu ikpo okwu na nkwakọ ụlọ ọrụ, "The 27th China International Packaging Industry Exhibition (Sino-Pack2021)" na "China (Guangzhou) International Packaging Produ ...
INTPAK 2020 Shanghai International Packaging Industry Exhibition ga-ezute gị na Shanghai World Expo Exhibition Hall na August 12-14
Ihe ịga nke ọma ijide INTPAK 2019 Shanghai International Packaging Industry Exhibition with the theme of “Packaging Industry, Wiswin Wins the Future” na-aga n'ihu na-enwupụta ihe karịrị iri ngosi ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa gara aga, na-aghọ ndị isi ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa ihe ngosi ...
Ebu ụzọ mepụta usoro nchọpụta igwe na UK na 1948, ma ugbu a, a na-eji ya eme ihe na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa nri. Udiri aha gị bụ ihe niile dị na ụwa a jikọtara ọnụ, jupụta ngwaahịa. Ntinye ego na akụrụngwa nkwakọ ngwaahịa na-emepụta ngwugwu echekwara echekwa nwere ike ...
Mgbe ị na-achọ igwe nkwakọ ngwaahịa, naanị ndị kacha mma ga-eme. Igwe maka azụmahịa gị karịrị ego izizi. O nwere ike ime ma ọ bụ mebie ọdịnihu nke ụlọ ọrụ gị. Yabụ ịchọrọ ịhọrọ igwe nkwakọ ngwaahịa nke akụrụngwa kachasị mma. Ma ị nwere mmasị ...
Ihe 5 Ihe Ngwunye Ngwaahịa / Organic Gị Kwesịrị Ime
Nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa gị bụ mmekọrịta mbụ mmekọrịta nke onye zụrụ ahịa na akara gị. Kedu ka ị ga - esi mara ma ọ na - enwe mmetụta dị ukwuu? N'okpuru ebe a bụ ihe 5 ngwaahịa gị / ngwaahịa ị ga-emerịrị ka ọ dị ukwuu, ọ bụghị naanị mma. 1. Chebe ngwaahịa gị ka ọ ghara ibibi ya na mmetọ. Na nu ...
Etu ịhọrọ otu igwe kwụ ọtọ
Ka anyị gosi gị otu esi ahọrọ igwe nkwakọ ngwaahịa ziri ezi. Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ ịchọta igwe nchịkọta nri. 1, Nke mbụ, chọpụta ngwaahịa ịchọrọ ịchọọ maka ịzụta gị, ngwaahịa dị iche iche ga-eji sistemụ ndochi dị iche iche, dị ka auger filler, nchikota anyị ...
Kedu ụdị igwe nkwakọ ngwaahịa dị mkpa maka nkịta nri nkwakọ ngwaahịa?
Mụ anụmanụ bụ ezigbo ndị ha na ụmụ mmadụ na-emekọ ihe, ma ugbu a ọnọdụ akụ na ụba anyị zuru oke, ọ ghọọla ihe ọ forụ nye ọtụtụ mmadụ ịchekwa anụ ụlọ, ndị na-echekwa karịa bụ nkịta. Ya mere, ina nke nkịta nri na-azụ, akpa bụ otu nke kasị mma nhọrọ nke bụ adaba na ịdị ọcha, and it i ...
Kedu otu esi ahọrọ pellet na-eri nri ma ọ bụ pellets na-ese n'elu mmiri? Iji tinye ya na 20KG PP / Nailon Bag site GW-450-550-650 Automatic Open-mouth Bagging Machine
A na-ekewa nri nri azụ azụ maka azụmaahịa (extruded) ma ọ bụ ọdịnala ọdịnala (pelleted pressure). Abụọ na-ese n’elu mmiri ma na-eri mmiri nwere ike ịmị mkpụrụ na-enye afọ ojuju, mana ụfọdụ ụdị azụ na-ahọrọ ndị sere n’elu mmiri, ebe ndị ọzọ na-elo mmiri. Ugbu a, nke bụ ụdị azụ azụ nri dị mma? Imuo o ...